नारायण शर्मा | जेठ १, २०७७ बिहिबार | 0
आज जेठ १ अर्थात विद्यार्थी दिवस ! विद्यार्थीहरुको आन्दोलनका अगाडि तत्कालीन सत्ता झुकेको दिन ! आजभन्दा ५६ बर्ष अगाडि अर्थात २०२१ साल जेठ १ गतेकै दिन विद्यार्थीहरुको आन्दोलनसामु तत्कालीन पञ्चायती सत्ता झुकेको थियो र बन्दी विद्यार्थीहरुलाइ रिहा गर्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराउन सहमत भएको थियो ।
त्यही ऐतिहासिक दिनको एक बर्षपछि २०२२ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन भएको थियो । २००६ सालमा अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेशनको नामबाट जन्मिएको संगठन २०२२ बाट अ.ने.रा.स्व.बि.यु.को नामबाट अघि बढेको थियो । त्यसयता विद्यार्थी आन्दोलनमा धेरै आरोह अवरोहहरु आएका छन् । देशमा भएका हरेक आन्दोलनहरुमा विद्यार्थी संगठनको अमूल्य योगदान रहँदै आएको छ । यतिबेला विद्यार्थी संगठनहरु विभिन्न चिरामा विभक्त छन् । राजनीतिक दलैपिच्छेका विद्यार्थी संगठनहरु छन् । ती सबैले आफूनै विद्यार्थी आन्दोलनको मूलप्रवाह भएको दाबी गर्न छुटाउँदैनन् । अखिलकै नामबाट पनि दर्जन विद्यार्थी संगठन खुलेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? वास्तविक अखिल कस्तो हुनुपर्छ ? विद्यार्थी आन्दोलनको कर्तव्य र दायित्व बुझाउँदै लेखिएको रक्तिम परिवारको गीत छ एउटा– अखिलको झण्डा फरर ।’
जनगायक जीवन शर्माद्वारा आजभन्दा ४१ बर्ष अगाडि लेखिएको उक्त गीत विद्यार्थी आन्दोलनको एक सदाबहार गीत बन्न पुगेको छ । विद्यार्थी दिवसको ऐतिहासिक दिनमा आज यहाँ त्यही गीतका बारेमा सानो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
गरिबको झुप्रो छाप्रोमा
मुक्तिको बिगुल फुकेर
जनताको अञ्जान दिमागमा
चेतना जगाई बिउँझाउने
अखिलको झण्डा फरर...
यसरी गीतको पहिलो हरफले नै प्रष्ट पारेको छ, विद्यार्थी संगठनहरुको काम विशुद्ध विद्यार्थीहरुका समस्यामा मात्र केन्द्रित हुने होइन । जनतालाई चेतनशील बनाउन गरिबका झुग्गी झुपडीहरुमा पनि पुग्नुपर्दछ उनीहरु । गाउँबस्तीमा पुगेर जनतामा चेतनाका बीजहरु छर्नुपर्छ उनीहरुले । जनतालाई मुक्ति अरु कुनै शक्तिले गरिदिने होइन । त्यसका लागि उनीहरु आफै जागरुक भएर उठ्नुपर्छ । जनताका बीचमा पुगेर यही यथार्थबोध गराउनुपर्छ विद्यार्थी संगठनहरुले ।
आफन्त पराइ चिनेर
बैरिको किल्ला तोडिदे
जनताको बीचमा घुलेर
सृजना दियो जलाउँदै
बैरीको संसार गलाउदै
विद्यार्थी सारा एकजुट पार्ने
यो रातो झण्डा फरर...
विद्यार्थी संगठन जनताका बीचमा घुलमिल हुन सक्नु पर्दछ । जनताको शत्रु पनि जनताकै बीचमा लुकेर बसेको हुन्छ । को आफन्त ? को पराई ? जनताको अन्जान दिमागले छुट्टाउन सकिरहेको हुँदैन । जनताले जसलाई आफ्नो ठानेका हुन्छन्, तिनै जनताको मुक्ति आन्दोलनका शत्रु पनि हुन सक्छन् । चेतनाको अभावमा जनताले उनीहरुलाई चिन्न सकिरहेका हुँदैनन् । ती जनबैरीहरुले जनताका बीचमा फाटो पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिरहेका हुन्छन् । जातका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा, लिङ्गका आधारमा समाजमा अनेक प्रकारका विभाजनका रेखाहरु कोरिएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनको काम विभाजित जनतालाई एकीकृत पार्नु हो । विद्यार्थी वर्ग आफैमा सिर्जनशील समूह हो । नयाँ नयाँ सिर्जनाका द्वीपहरु उनीहरुले जलाउँदै जानु पर्छ । तिनै चेतनाका द्वीपहरुले बैरीको संसार गलाउँदै जानु पर्छ । अरुलाई एकजुट हुने उपदेश बाँड्दै हिड्ने मात्र होइन विद्यार्थी संगठनले आफैमा पनि एकताबद्ध रहन सक्नु पर्दछ । गीतले त्यही सन्देश दिएको छ ।
दुष्टको सेतो आतङ्क
जनतालाई सधै तर्साउँछ
यो कालो मैलो बादल
बिपुल आँधी बर्षाउँछ
शत्रुको मुटु थर्काउँदै
जालीको भ्रमजाल तर्काउँदै
शहीदको रगतले रङ्गेको हाम्रो
यो रातो झण्डा फरर
जनदुश्मनहरुले जनतालाई सधै आतंकको जालोभित्र राख्न चाहन्छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा जनतालाई आफ्नो दास बनाइराख्न उनीहरुले अनेक प्रकारका भ्रमजालहरु बिछ्याइरहेका हुन्छन् । बिद्यार्थी संगठन जनताका बैरीहरुद्वारा बिछ्याइएका ती भ्रमजालहरुलाइ च्यात्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । जनताको मुक्ति अभियानको बाटो सजिलो र सुखमय अवश्य हुँदैन । त्यसका लागि कठिनतम संघर्षको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी अघि बढ्दा जनबैरीहरुले अनेक किसिमका अवरोधहरु तेर्साउन सक्छन् । जनमुक्ति अभियानका योद्धाहरुले जेलनेलको यातना भोग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ज्यान नै जान सक्छ । संगठनको झण्डामा जुन रातो रंगको पृष्ठभूमि रहेको हुन्छ, त्यो संघर्षका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरुको रगतको प्रतीक हो ।
विद्यार्थी संगठनले सधै शहीदको त्यो योगदानलाई आत्मसात गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्दछ । यसरी निरन्तर संघर्षको कठिनतम मार्गमा अघि बढेमात्र जनताको आफ्नै ब्यवस्था, स्थापित हुनसक्ने छ । अखिलको झण्डा फरर गीतले त्यही शिक्षा दिएको छ ।
गरीबको खुन पिइसके
सामन्त शोषक ठालुले
जिन्दगी हाम्रो लिइसके
दुःखीको न्यानो मायामा
बिहानी लाली बोलाई हिड्ने
हरेक रातपछि बिहानी लाली आउने गर्छ । कसैले चाहेर पनि रातको अन्धकारलाई सधैभरि रोकेर राख्न सक्दैन । परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । रातपछि दिन आएजस्तै शोषक, सामन्त र तानाशाहीहरुको सत्ता ढालेर एकदिन जनताको आफ्नै व्यवस्था पनि आउनेछ । यही विश्वास आफूले पनि लिँदै र जनतालाई पनि दिलाउँदै विद्यार्थी योद्धाहरु अघि बढ्नु पर्छ । दीनदुःखी र श्रमजीवीहरुको न्यानो मायालाई मनमा साँचेर अग्रगमनका पक्षमा बिद्यार्थी योद्धाहरु सधैं अग्रसर हुनु पर्दछ । गीतले मूलरुपमा त्यही भाव बोकेको छ ।
म्युजिक नेपालमा २०४७ सालमा रेकर्ड गरिएको यो गीत रक्तिम परिवारको जनगीति यात्रा भाग २ मा रहेको छ । जनगायक जीवन शर्माकै सङ्गीत र उहाँसहित झोकेन्द्र थापा, देउमाया श्रीष र पुष्पा श्रीषको स्वरमा रहेको यो गीतले विद्यार्थी आन्दोलनमा क्रियाशील हरेक योद्धाहरुलाई ऊर्जा दिइरहेको छ । गीत रचनाको पृष्ठभूमि सम्झिदै जनगायक शर्मा भन्छन् ‘विद्यार्थी आन्दोलनले २०३६ सालतिर एउटा उचाई समातेको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा यो गीतको रचना गरिएको हो । त्यस्तै २०३६÷३७ सालतिर हुनुपर्छ, बागलुङको हाँडीकोट लेकमा भूमिगतरुपमा भएको विद्यार्थीहरुको एक सम्मेलनमा मैले पहिलोपटक यो गीत सुनाएको थिएँ ।’
त्यसयता हुने गरेका अखिल संगठनहरुको प्रायः सम्मेलनमा यो गीत घन्किदै आएको छ । बिद्यार्थी आन्दोलनलाई आधार बनाएर गीतहरु त अरु पनि बनेका छन् । तर ‘अखिलको झण्डा फरर’ जस्तो चर्चित शायद अरु गीत हुन सकेका छैनन् । यो विद्यार्थी आन्दोलनको सदाबहार गीत बन्न पुगेको छ । गीत रचनाकालदेखि अहिलेसम्म देशमा कैयौ महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु भएका छन् । तर श्रमजीवी जनताको पूर्ण मुक्ति अझै पनि हुनसकेको छैन । देशको राष्ट्रियता यतिबेला गम्भीर संकटमा छ । जनताको महान बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिहरुमाथि कालो बादल मडारिइरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यताहरु पनि खोसिँदै जान थालेका छन् । यस्तो बेला सत्ता र राजनैतिक पार्टी विशेषको भजनमण्डली बनेर होइन, देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित बनोस् । आआफ्ना समूहका डम्फु बजाउन छोडेर साझा मुद्दाहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुले एकीकृतरुपमा सशक्त खबरदारीपूर्ण संयुक्त आन्दोलन अघि बढाउन् । आफ्नो कर्तव्य र दायित्व समेत बिर्सिएर राष्ट्रघात र जनघाती कार्यतर्फ उद्धत भइरहेको वर्तमान सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वलाई दरो रुपमा खबरदारी गरोस् विद्यार्थी आन्दोलनले । ५७ औं विद्यार्थी दिवसको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना ! विद्यार्थी दिवसको यस अवसरमा अब सुनौ विद्यार्थी आन्दोलनको सदावहार गीत ः